‘तारेभिरले मलाइ स्थापित गर्छ भन्ने बिश्वास छ’ : रेखा फागो (नायीका, तारेभिर) | kollywood Update
‘तारेभिरले मलाइ स्थापित गर्छ भन्ने बिश्वास छ’ : रेखा फागो (नायीका, तारेभिर)
धरान घर भएकि रेखा फागो चलचित्र तारेभिर बाट डेव्यू गर्दैछिन् । २०१२ मा भएको मिस लिम्बुमा वेष्ट स्किन अवार्ड पाएको रेखाले हाल सम्म एक दर्जन भन्दा बढि म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरी सकेकि छिन् । उनले अभिनय गरेको चलचित्र तारे भिर यहि असार २ गते बाट प्रर्दशन हुदैछ । रेखाको पहिलो चलचित्र तारेभिरकै सेरोफेरोमा रहेर हामिले उनी संग कुराकानि गरेका छौ
रेखा जी स्वागत छ कलिउड अपडेट मा ।
धेरै धेरै धन्यवाद>
धरान बाट राजधानि आउनु भएको छ । चलचित्रकै लागि कि व्यक्तिगत कामले ?
यो पटक म बिल्कुलै मेरो पहिलो चलचित्र तारेभिरको लागि काठमाण्डौमा छु । चलचित्रको प्रचार प्रसारमा दौडिरहेको छु ।
चलचित्र तारेभिर सम्म कसरी आइपुग्नु भयो ?
मिस लिम्बुमा सहभागि भए पछि लिम्बुहरुकै एक कार्यक्रममा जाने क्रममा मेरो भेट प्रेम सुव्वा सर संग भयो । उहाँ संग चिनजान भयो , उहाले अडिसन लिनु भयो र म तारेभिरमा खेल्ने अवसर मिल्यो ।
तारेभिरमा काम गर्दा कस्तो अनुभव रह्यो ?
मैले म्युजिक भिडियोमा नै क्यामेरा फेस गरेको हुँदा खासै गाह्रो भएन । फेरी सुट हुनु अघि मलाइ प्रेम सरले अभिनय पनि सिकाउनु भएको थियो । वर्कसप भयो खासै अफ्ठ्यारो फिल भएन । म्यूजिक भिडियो भन्दा फिल्ममा काम गर्दा मज्जा आयो ।
तारेभिरमा कस्तो क्यारेक्टर हो तपाइको ?
तारेभिरमा एक सिम्पल बहिनिको क्यारेक्टर निर्बाह गरेकि छु । दिदिको रुपमा बिष्णु जी ले अभिनय गर्नु भएको छ । आफूलाइ दिएको क्यारेक्टर लाइ जष्टिफाइ गर्ने कोशिश गरेको छु । चलचित्रको स्पेशल शो हेर्न आउनु भएको व्यक्तित्वहरुले राम्रो भन्नु भएको छु ।
भने पछि चलचित्रबाट निकै आशाबादी हुनुहुन्छ ?
लामो समयको मेहनत छ , आफ्नो क्यारेक्टरलाइ न्याय गर्न सकेको छु जस्तो लाग्छ , फेरी फिल्म हेर्ने व्यक्तिहरु बाट सकारात्मक प्रतिकृया पाएको छु त्यहि भएर पनि तारेभिर बाट निकै आशाबादि छु । तारेभिरले नेपाली रजटपटमा मलाइ स्थापित गर्छ भन्ने बिश्वास छ ।
तारेभिर कस्तो चलचित्र हो ?
परिवार संग बसेर हेर्न मिल्ने फिल्म हो तारेभिर ।समाजमा घटिरहने रियल घटनाहरुलाइ चलचित्रमा समाबेश गरीएको छ । फिल्म हेरिरहदा आफ्नै समाजको परिकल्पना गरिने छ । साथै एक्सन , लभ कमेडि , सेन्टिमेन्स सवै तारेभिरमा पाउन सकिन्छ ।
चलचित्र भित्रको आफ्नो क्यारेक्टर निर्बाह गर्न आफूलाइ कसरी तयार गर्नु भो ?
यहि चलचित्रको लागि आफूलाइ तयार गर्न करिव ३ बर्ष लागेको छ । यस चलचित्रकै लागि मैले मार्सल आर्ट को स्पेशल कोर्ष पनि गरेको छु । साथै रेगुलर नृत्य क्लास पनि लिए , अभिनय सिके , फाइट पनि सिके ।
आगामि दिनमा कस्ता फिल्म खेल्न चाहनु हुन्छ ?
कलाकार भए पछि यस्तो फिल्म खेल्छु , यस्तो खेल्दिन भन्न हुदैन जस्तो लाग्छ । तर पनि नारि संवेदना भएका चलचित्र , समाजलाइ सकारात्मक परिवर्तन गर्न खोज्ने फिल्ममा अभिनय गर्न चाहन्छु ।
समयको लागी धेरै धेरै धन्यवाद रेखा जी
कलिउड अपडेटमा मलाइ स्थान दिनु भयो यहाँलाइ पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।